परीक्षणसँगै घट्यो कोरोना संक्रमणदर, सक्रिय संक्रमित १२ हजार मात्रै ! « Lokpath
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमि आएको छ । परीक्षणको दरमा कमि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्यामा समेत कमि आएको हो । जसको कारण सक्रिय कोरोना संक्रतिको संख्या १२ हजारमा आइपुगेको छ । हाल नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या १२ हजार २ सय ९७ रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
देशभर कुल ८ हजार ७७ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा ३ सय ८५ जनाको पीसीआर र ६ जनाको एन्टीजेन पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ८ लाख ९८ हजार ३ सय ९९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म नेपालमा ७ लाख ८१ हजार ४ सय ५६ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै नेपालमा थप ६ सय ८० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ६ जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार २ सय ८४ पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,आश्विन,३१,आईतवार १८:०६
आज दिनभर के-के भए भए ? मुख्य १५ समाचार हेर्नुहोस् (भिडियोसहित)
१. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भोली निर्वाचन हुँदै, अध्यक्ष पदका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनद्वारा प्यानलसहित
इच्छाराज तामाङविरुद्ध अभियोगपत्रसहित मुद्दा दायर
काठमाडौं । ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । शुक्रबार तामाङविरुद्ध १४८ पृष्ठ
कोरोना अपडेट : मृतक संख्या शून्य, कस्तो छ पछिल्लो तथ्यांक (विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर ७ हजार ८ सय